ရခိုင်မှ ပရဟိတနှစ်ကျောင်းသို့ ကလေးငယ်များ ပညာသင်စရိတ် ပကြိမ် ငွေငါးသိန်းလှူဒါန်း ~ Arakan Student Monks Association
ရခိုင်မှ ပရဟိတနှစ်ကျောင်းသို့ ကလေးငယ်များ ပညာသင်စရိတ် ပကြိမ် ငွေငါးသိန်းလှူဒါန်း
12:42 AM ပင်မ, လုပ်ဆောင်မှု No comments
မိဘများဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများကြောင့် ရခိုင်ပြည်အနှံ့ရှိ လူငယ်များ၏ ပညာရေးနှင့် ပီပြင်သော ဘ၀တစ်ခုဖေါ်ဆောင်ရေးမှာ ရင်နင့်ဖွယ်ရာအတိဖြစ်နေသည်မှာအထူးပြောစရာပင်မလိုတော့ပါ၊
ယင်းအခြေနေများကို သဘောပေါက်၍မြှင့်တင်ပေးလိုသော လူငယ်စေတနာရှင်များသည် ရခိုင်လူငယ်များ ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်
အမိမြေက ငါတို့အား ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလည်း ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမထုတ်ပဲ၊ အမိမြေကို ငါတို့က ဘာလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုသာ အဖန်ဖန်မေးကာ ဘ၀နှင့် ရှိသမျှအရည်ချင်းများကိုပုံအော အပ်နှံပြီး
စွမ်းဆောင်ပေးနေကြသောရဟန်းပျိုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို၊လွယ်ကူအဆင်ပြေ စေရန် မိမိတို့၏ စေတနာပူးပေါင်းပေးကြသည်မှာ အထူးပင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလှပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင် ၀ါဆိုတစ်ကြိမ်၊ ၀ါကျွတ်တစ်ကြိမ်၊ သင်္ကြန်တစ်ကြိမ်အားဖြင့် ၃. ကြိမ်စီ ကြိုးစား၊ စုပေါင်းကာထောက်ပံ့မှုတွင်လည်း ဖြူစင်သောနှလုံးသားများပေါင်းစပ်ကာ ၄င်းကလေးငယ်များသို့ မိမိတို့စေတနာလက်တစ်ဖက်စီ စုပေါင်းကမ်းလှမ်းပေး ဆွဲခေါ်တင်ကြဖို့ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ပထမအကြိမ်တွင်လှူဒါန်းထားသောစေတနာရှင် (၂၆)ဦးတွင် တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ယူနေကြသော ရဟန်းပျို (၂၁) ပါး၊ လူ (၅) ယောက်ပါဝင်လှူဒါန်းထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
နောက်အကြိမ်ထောက်ပံ့မှုများတွင် ရဟန်းပျိုများနှင့်အတူ လူများလည်း ပိုမို၊ပူပေါင်းပါဝင် ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရန် မျှော်လင့်ထားပါကြောင်း…..
အမွန်မြတ်ဆုံး ဆန္ဒများဖြင့်……..အရှင်ပညာလင်္ကာရ. ၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၁
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှ ကလေးငယ်များပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးအတွက် အလှူရှင်များ
၁၉.၇.၁၁.မှ ၁.၈.၂၀၁၁. နေ့ထိဖြစ်သည်
၁၃.ရက်အတွင်း စေတနာရှင်များထဲ့ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း.၂၀၂၀၀.ဘတ်ရရှိပါသည်။
စေတနာရှင်များထဲ့ဝင်ထားသော စုစုပေါင်းဘတ်ငွေမှာ ၂၀၂၀၀.တိတိ၊ မြန်မာငွေအားဖြင့် ၅သိန်းဖြစ်သည်၊ ၄င်းငါးသိန်းမှ.၄.သိန်းအား ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ၀ဲကြီးထောင့်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပရဟိတကျောင်းတွင် ကလေးများ မနက်၊ညနေအချိန်များတွင် စာဖတ်ကျောင်း၊ကျူရှင်၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများကို၊ လျပ်စစ်မီးဖြင့် လွယ်ကူစွာလည်ပတ် နိုင်စေရန် မီးစက်တစ်လုံးအတွက် ၄ သိန်းကျပ်လှူဒါန်းလိုက်ပြီး၊ ကျန် ၁. သိန်းအား မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ တိမ်ညိုကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပရဟိတကျောင်းမှ ကျောင်းနေ၊ကျောင်းစားအဖြစ် ပညာသင်ယူနေကြသော ကလေးများအတွက် ဆန်အိပ်များလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်၊ မိဘများဆင်းရဲနွမ်းပါးသော လူငယ်များပညာရေး ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်စေရန်နှင့်၊ လူငယ်များပညာအရည်အချင်းများ မြင့်မားလာစေရန်မျှော်ကိုးလျက်(၂.၈.၂၀၁၁) နေ့တွင် ဦးဂျပန်ကြီးမှတစ်ဆင့် ၀ဲကြီးထောင့်ကျေးရွာဆရာတော် ဦးစန္ဒာဝရနှင့် ဦးနရိန္ဒတို့ဆီသို့ လှူဒါန်းလိုက်ပါသည်။
အရှင်ပညာလင်္ကာရ။ ၆၊ ၈၊ ၂၀၁၁.